Abavelisi beBATRI YE-ACID ye-LEad-e-China ababoneleli beBHETRI YE-asidi & neFactory
ubomi obude obutywiniweyo be-lead-acid iibhetri zihlangabezana ngokugqibeleleyo neemfuno zezicelo ezininzi ezahlukeneyo, kubandakanywa unxibelelwano, izixhobo zonyango lwasekhaya (HME) / ukuhamba, kwaye ngokusisiseko akukho mfuneko yokongeza amanzi adibeneyo phakathi kobomi benkonzo.
Ikwanazo neempawu zokuxhathisa ukothuka, ukumelana nobushushu obuphezulu, umthamo omncinci kunye nokuzikhupha okuncinci.
Iqela lethu lophuhliso lidibanisa imfuno yemarike kunye nokulungiswa koyilo, ukhetho oluchanekileyo lwecandelo kunye neenkqubo zokwenziwa kwezobugcisa zanamhlanje ukuvelisa izisombululo zebhetri ezibiza kakhulu kwizicelo zanamhlanje.
Front Terminal DET ibhetri
Ibhetri yeDET yangaphambili
Ibhetri ye-lead-asidi ene-terminal ye-DET yangaphambili yenzelwe ngokukodwa usetyenziso lonxibelelwano, kunye nobomi bentlawulo edadayo yeminyaka eyi-12.Ipleyiti egobileyo ye-3D, ifomula ekhethekileyo yokuncamathelisa kunye nobuchwepheshe bomahluli beAGM bamva nje bamkelwe.
Ulwakhiwo olude kunye noluncinci kunye noyilo lwangaphambili lwe-terminal lwenza kube lula ukuyifaka kunye nokugcina, kwaye ubungakanani buhambelana ngokugqibeleleyo ne-19 "/ 23" ikhabhinethi eqhelekileyo / i-rack.
DET amandla VRLA ibhetri (AGM & Gel)
I-DET Power Valve elawulwayo etywiniweyo ye-lead-acid ibhetri ikwabizwa ngokuba “yibhetri yogcino lwasimahla”.
I-epoxy resin ekhethekileyo etywiniweyo, igobolondo legroove kunye nesakhiwo sokugquma, kunye nendlela yokutywina emide ye-terminal kunye nesinxibelelanisi samkelwa ukuze kuqinisekiswe ukuba i-valve elawulwayo etywinwe ibhetri ye-lead-acid inokumelana okubalaseleyo kokuvuza, kwaye ubomi obuthile bude (ukuya kumaxesha angama-1200. ), umthamo owaneleyo, ukuqhuba kakuhle kunye noluhlu olubanzi lobushushu, Isetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iinkalo zobomi.
Umjikelo onzulu ubomi obude obutywinwe iibhetri ze-lead-asidi zihlangabezana ngokugqibeleleyo neemfuno zezicelo ezininzi ezahlukeneyo, kubandakanywa unxibelelwano, izixhobo zonyango lwasekhaya (HME) / ukuhamba, kwaye ngokusisiseko akukho mfuneko yokongeza amanzi adibeneyo phakathi kobomi benkonzo.
Uluhlu lwe-Solar Gel VRLA yamkela i-gelled electrolyte monobloc eyilelwe ukunika amandla athembekileyo, angenakugcinwa kulondolozo lwezicelo zamandla ahlaziyekayo apho kufuneka imijikelo enzulu rhoqo kwaye ugcino oluncinci luyanqweneleka.
I-VRLA yeNdibano ye-Indoor yeKhabhinethi isisombululo
Iikhabhathi zendibano yebhetri yeDET VRLA yomelele kakhulu, kwaye kulula ukuyifaka.
Yenzelwe ukusetyenziswa kunye nobuninzi bohlobo lweemodeli zetheminali yebhetri, ezi khabhathi zinokungena kwiinkqubo ezininzi ezahlukeneyo.
Esi sisombululo sinokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo kwaye sibhetyebhetye ukuxhasa imfuno yesicelo sakho.
I-2 ~ 3 iiLayers zeNtsimbi yeMoto ye-UPS yeBattery yeShishini yokuGcina iRetail Display Rack
I-Det amandla i-rack yebhetri ye-VRLA yomelele kwaye kulula ukuyifaka.
Idizayinelwe uninzi lweemodeli zetheminali yebhetri, ezi rakhi zifanelekile kwiinkqubo ezahlukeneyo.
Ezi zinokufakelwa ngokudityaniswa neeracks zebhetri ezininzi zeVRLA ezinobungakanani berekhi yesiko.